We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခြံဝင်းအတွင်းသတင်းဝင်ရောက်ယူသည့် သတင်းထောက်အချို့ SBသတင်းတပ်ဖွဲ့သို့သတင်းပေး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခြံဝင်းအတွင်းသတင်းဝင်ရောက်ယူသည့် သတင်းထောက်အချို့ SBသတင်းတပ်ဖွဲ့သို့သတင်းပေး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ခြံဝင်းအတွင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများတွင် သတင်းဝင်ယူသော ပြည်တွင်းသတင်းထောက်အချို့သည် SB သတင်းတပ်ဖွဲ့အတွက်အသံဖမ်းပေးခြင်း၊ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းယူပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ ထိုသို့SBသတင်းတပ်ဖွဲ့ကိုစိတ်ပါလက်ပါ ကူညီပေးနေမှုများကိုမြင်တွေ့နေရသည်ဟု သိရသည်။ အမေရိကန်သံရုံးတွင် ဆီနိတ်တာဂျင်ဝက်၏သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်လည်း အသံကိုရီကော်ဒါဖြင့်ဖမ်းပေးပြီး သံရုံးရှေ့တွင်စောင့်နေသော SB သတင်းတပ်ဖွဲ့ကို ပေးသည်ကို မြင်တွေ့ရသူတဦးကပြောပြခဲ့သည်။ သတင်းထောက်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးချပြီး SB သတင်းပေးမီဒီယာသမားများကို ကန်ကွက်ရှုတ်ချသင့်ကြောင်းအဆိုပါ မျက်မြင်ပြည်တွင်းသတင်းထောက်တဦးကပြောပြခဲ့သည်။
hey,, we need " Demo" right?? they're human too,
they much have "Demo".. can not say NLD ,is right.
other is wrong,,
SB ဆိုတဲ့လဒတွေ လီးပေးကိုင်ထားလိုက်.. ၀မသေးရင် ပါးစပ်ထဲ့ ထည့်ပေးထားလိုက်...ဒါအသင့်တော်ဆုံးပဲ